Gospel Music UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwezinto Zonke Ezulwini Nasemhlabeni (Zulu Subs) | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Gospel Music "UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwezinto Zonke Ezulwini Nasemhlabeni" (Zulu Subs)
Abela 301 Watch Full Movie
Isintu besilokhu sifuna lezi zimpendulo iminyaka eyizinkulungwane ezimbalwa: kwenzeka kanjani ukuthi imihlaba esemkhathini iqhubeke ngokuhleleka okuphelele kangaka? Kungani zonke izinto eziphilayo zihlale zihamba ngokuzungeza zilandela imithetho engaguquki? Kungani abantu bezalwa, futhi khona-ke kungani sifa? Ngubani ngempela onqume yonke le migomo nemithetho? Ngubani ngempela obusa phezu kwezulu nomhlaba nazo zonke izinto? Lesi siqephu esisuka kubhayisikobho yobuKristu esithi, Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke, sizokuqondisa ukuze ufinyelele emsukeni wale mibuzo futhi sambule zonke lezi zimfihlakalo.